I-KISSmetrics Ikhipha Umbiko Wendlela Eveza Kakhulu | Martech Zone
I-KISSmetrics Ikhipha Umbiko Wendlela Edalula Kakhulu
NgoLwesithathu, Okthoba 22, 2014 Douglas Karr
Kuhlala kubonakala sengathi iqembu likhona KISSmetrics isinyathelo esisodwa ngaphambi kwejika futhi kungenzeka ukuthi bakwenzile futhi ngalokhu okungeziwe. Uma uvule imibiko yokugeleza kweGoogle Analytics, uthola imininingwane ethakazelisayo yokuthi abantu bafika kanjani futhi bashiya isayithi lakho kanye nokugeleza kwethrafikhi kuyo… kepha awukwazi ukubona izindlela abantu abazithathayo.
Sineklayenti njengamanje njengoba sinikeze ukuqonda ukuthi kunethuba lokuvakashela isiza sabo amahlandla ayishumi nambili futhi selibe emakhasini angaphezu kwama-40 ahlukene… kepha ukubethela phansi lapho befika khona nalapho beshiye khona kubucayi. Phindaphinda lowo msebenzi ngezinkulungwane zezivakashi futhi kuba cishe kungenzeki.
Kuthiwani uma ungakhomba wonke amakhasi afika esiza sakho bese ubheka umbiko olula okhombisa izindlela abantu abazithatha kusayithi lakho… mhlawumbe kusuka ekhasini lokufika, ekubukeni kwevidiyo, kuya kumakhasi entengo, kuya ekuguqulweni. Ukuhlaziya nokuqonda izinyathelo ezithathwa ngabantu kungakusiza ukuthi wenze lezo zindlela zibe lula, mhlawumbe ukuhlanganisa okunye okuqukethwe, futhi unikeze nekhasi elilodwa elingenamthungo eliphendula yonke imibuzo edingekayo.
Nawu umbono we Umbiko we-KISSmetrics Path, ungachofoza kuyo ukuze uthathe i-test-drive:
Tags: indlela yokuguqulaukwakhekaumbiko wendlelaindlela eya ekuhlanganyeleni
Ukubeka i-CMO Yakho Ukuphatha Ubuchwepheshe Bokumaketha Kuyakhokha!